Maninona no ilaina ny fitaovana fiaraha-miasa matotra mba handrosoan'ny ekipanao | Martech Zone
Hightail dia namoaka ny valiny voalohany Fanadihadiana momba ny fiaraha-miasa amin'ny famoronana. Ny fanadihadiana dia nifantoka tamin'ny fomba fiaraha-miasa amin'ny ekipa marketing sy famoronana mba hanaterana ireo tendrombohitra misy atiny am-boalohany ilaina hitarika fampielezan-kevitra, hanomezana valin'ny orinasa ary hampitombo ny varotra sy ny vola miditra.
Manimba ny famoronana ny tsy fahampian'ny enti-manana sy ny fangatahana mitombo
Miaraka amin'ny famoahana atiny mihamitombo manerana ny indostria rehetra, ny filàna atiny tsy manam-paharoa, manery, mampahalala ary avo lenta amin'izao fotoana izao. Ny algorithman amin'ny fikarohana dia mitaky izany, mivelatra amin'izany ny tambajotra sosialy, ary mahazo tombony amin'izany ny orinasa. Na izany aza, rehefa miakatra ny fitakiana, potika ny famoronana.
Manam-pahaizana momba ny marketing sy ny famoronana mihoatra ny 1,000 no namaly, manome ny heviny fa ny fizotran'ny fiaraha-miasa amin'ny famoronana dia manahirana loatra, mandany andro ary mampihena ny kalitaon'ny atiny famoronana. Ny dingana tsy mahomby sy tapaka ho an'ny fiaraha-miasa amin'ny famoronana dia mandreraka, manimba ny toe-tsain'ny ekipa ary misy fiatraikany ratsy amin'ny kalitaon'ny famoronana famoronana.
Ny votoatin'ny kalitao avo lenta dia mitombo. Ny ekipa marketing dia fanamby hamaly ny fangatahana mitombo ary hamokatra atiny am-boalohany bebe kokoa izay natao manokana, mifandraika, mifanaraka amin'ny torolalan'ny marika sy manana kalitao avo indrindra, ary ny ankamaroany dia mila manao izany amin'ny loharanon-karena mitovy. Mihombo hatrany ity olana ity ary ny ekipa tsara indrindra dia mitady fomba vaovao hiaraha-miasa - manomboka amin'ny fiterahana ka hatramin'ny fahavitana - mba hahatratrarana io fangatahana io. Tale jeneralin'ny Hightail, Ranjith Kumaran
Ny 87% natiora dia manaiky fa zava-dehibe amin'ny fikambanan'izy ireo ny mitazona ny kalitaon'ny votoaty raha mora fanitsiana ny enti-manana efa misy hamaly ny fangatahana atiny.
Ny 77% amin'ny famoronana dia manaiky fa ny fizotran'ny famoronana dia manahirana
53% amin'ny famoronana no nilaza fa ny fitomboan'ny fihenjanana dia vokatry ny olona maro lasa voarohirohy amin'ny famerenana sy ny fankatoavana ny atiny
Ny 54% amin'ny famoronana dia manaiky fa nesorina ny ekipan'izy ireo, noho ny fihenjanana
55% amin'ireo mpamorona no manahy ny amin'ny hamaly ny fitomboan'ny fangatahana atiny avo lenta kokoa
Maherin'ny 50% ny famoronana no milaza fa ny faritra rehetra amin'ny fizotran'izy ireo dia manana olana
Tsy olana ara-barotra "fotsiny" io fa manimba ny orinasa manontolo
Ny dingana tapaka dia mitaky vola tena izy, ary ny fahatarana dia mifamatotra amin'ny fitomboan'ny fidiram-bola miadana:
62% no mino lany andro sy vola rehefa manitsy ny tsy fifankahazoan-kevitra sy ny tsy fifandraisan-davitra azo avy amin'ny dingana tapaka.
48% no milaza fa ny azy ireo naratra ny fitomboan'ny vola miditra satria tsy afa-nandefa atiny kalitao haingana izy ireo;
58% no miteny fampitomboana ny varotra sy ny vola miditra no tombontsoa lehibe indrindra amin'ny fandraharahana amin'ny fanamby amin'ny fizotran'ny fiaraha-miasa famoronana
63% no milaza fa misy izany tsy mahay mitsapa famoronana hafa araka izay itiavany azy, mametra ny fiatraikany amin'ny fampiasam-bolany haino aman-jery
Ireo ekipa dia mitady fomba tsara hiaraha-miasa
Na dia mety himenomenona aza ny ekipa marketing sy mamorona, ny 85% dia milaza fa ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-miasa - rehefa tsara izany - dia mety ho iray amin'ireo faritra tsara indrindra amin'ny asany. Na dia nanambara aza ny fanadihadiana fa 36% no mino fa tsy misy vahaolana teknolojia hamahana ireo olana atrehin'izy ireo amin'ny fiaraha-miasa amin'ny famoronana, tsy marina izany.
Mampiasa tokoa izahay Hightail miaraka amin'ny mpanjifanay manokana hanampy amin'ny famerenana sary, sary mihetsika, podcast ary horonan-tsary amin'ireo mpanjifanay. Ny sehatra dia manome interface madio ho an'ny ideation an'ny ekipa, fitantanana ny fananana, fahitana, fanehoan-kevitra ary fankatoavana.
Tags: Fitantanam-panananafankatoavana famoronanafiaraha-miasa famoronanahevitra mamoronadingana famoronanaekipa mpamoronahevitrafanadihadianaekipa
Apr 30, 2017 ao amin'ny 12: PM PM
Ity misy antony iray hafa ilain'ny mpamorona fitaovana fiaraha-miasa–afaka mampitombo be ny vokatra azony izy ireo amin'ny fiasana ao an-trano farafahakeliny andro vitsivitsy isan-kerinandro.
Jereo, mila fotoana irery mangina ny fizotran'ny famoronana vao mamorona. Nopotehin'ny Cubicle Farms izany tao amin'ny toeram-piasana, ny ankamaroany. Sarotra kokoa fotsiny ny miditra ao amin'ny Zone ary mijanona ela ao mba hahazoana vokatra tsy misy fahatapahana tsy tapaka.
Avy eo dia misy ny commute. Nandany adiny 3 isan'andro aho tamin'ny fiarakodia niverina namonjy ny asako tany Silicon Valley. Tsy nitondra soa ho ahy na ny mpampiasa ahy mihitsy ireo ora ireo—tsy lany ny fotoana ary nanampy trotraka izany.
Alaivo sary an-tsaina ny famerenana ireo adiny 3 na 2 andro isan-kerinandro-6 ora famokarana bebe kokoa. Ary, angamba vokatra bebe kokoa ao amin'ny birao mangina.
Saingy, mandeha ihany izany raha mbola afaka miara-miasa ianao ary tsy tapaka.
Ity dia iray amin'ireo zavatra lalovako amin'ny famaritana ny rafitra famokarana ampiasaiko amin'ny asako manokana. Amin'ny maha Solopreneur ahy dia nanangana orinasa an-tserasera aho izay mahazo mpitsidika 4.5 tapitrisa isan-taona ary miteraka fidiram-bola tsara. Tsy misy fomba hahavitako an'izany raha tsy misy ity karazana fampiakarana vokatra ity.
Manoritsoritra ny rafiko amin'ny fampianarana an-tserasera maimaim-poana aho eto:
Mifantoka manokana amin'ny filan'ny mpamorona izy io, koa manantena aho fa hahazo tombony ny mpamaky anao.
Miandrandra ny hafatrao lehibe manaraka.